Kylian Mbappe Oo Dhaawacmay Afar Maalmood Ka Hor Semi-finalka Champions League Ee Man City & PSG - Laacib
HomeWararka Champions LeagueKylian Mbappe Oo Dhaawacmay Afar Maalmood Ka Hor Semi-finalka Champions League Ee Man City & PSG
Kylian Mbappe Oo Dhaawacmay Afar Maalmood Ka Hor Semi-finalka Champions League Ee Man City & PSG
April 25, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Xiddiga reer France ee Kylian Mbappe ayaa garoonka laga saaray daqiiqaddii 87aad ee kulankii kooxdiisu ay 3-1 ku karbaashtay Metz fiidkii hore ee xalay, kaddib markii uu soo gaadhay dhaawac.
Weeraryahankan ayaa kooxdiisa PSG u dhaliyey laba ka mid ah goolasha ay kooxdiisu ku badisay, laakiin nasiib-darro waxa uu garoonka ka baxay daqiiqado kooban iyadoo ay ka hadhsan yihiin dhamaadka.
Kylian Mbappe oo isku dayaya inuu kubadda la dhaafo Habib Maiga daqiiqaddii 83aad, ayuu dhaawac kasoo gaadhay muruqa, waxaana lagu soo beddelay Julian Draxler oo ciyaaray afartii daqiiqadood ee ugu dambeeyey.
Tababare Mauricio Pochettino oo ka hadlay dhaawaca Kylian Mbappe ayaa niyadda u dejiyey taageereyaasha Paris Saint-Germain, waxaanu u sheegay in uu diyaar noqon doono ka hor kulanka Arbacada ay kula ballansan yihiin Manchester City.
Pochettino oo warbaahinta la hadlayay ciyaarta kaddib, ayaa wax laga weydiiyey dhaawaca Kylian Mbappe, waxaanu yidhi: “Muruqa ayay jug kasoo gaadhay, laakiin wuu fiicnaan doonaa Arbacada.”
Dhaawaca soo gaadhay Kylian Mbappe ayaa naxdin weyn ku ah PSG oo Arbacada toddobaadkan garoonkeeda Parc des Princes ku martigelin doonta Manchester City lugta hore ee wareegga semi-finalka tartanka Champions League.
Xiddigan oo PSG usoo dhaliyey goolal muhiim ah kulamadii wareegga siddeedda ee Bayern Munich iyo wareegga 16ka ee Barcelona ay kusoo garaaceen, ayaa haddii ay kooxdiisu si weyn u tebi doontaa, iyadoo aan heli doonin khatartii weerarka ee ay lahayd.
Si kastaba, PSG ayaa la filayaa in ay warbixin rasmi ah kasoo saarto dhaawaca Kylian Mbappe maalmaha Axadda ama Isniinta.